Wakiilka QM Haysom oo ka walaacsan ammaandarada Puntland iyo baadda ISIS – Radio Daljir
Wakiilka QM Haysom oo ka walaacsan ammaandarada Puntland iyo baadda ISIS
Janaayo 4, 2019 3:34 b 1
Maanta waxa Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay khudbad ka jeediyey NICHOLAS HAYSOM. Md. Haysom ayaa khudbaddiisa ku soo qaatay ammaandarada ka jirta Soomaaliya, siiba Muqdishu iyo Puntland.
Waxa uu yiri, “Muqdisho iyo Puntland waxaa ka biloowday baad ay soo rogeen kooxda Daacish (ISIS), ayaga oo bartilmaadeed ka dhigtay ganacsatada. Ganacsadihii aan baaddaas bixinna waxaa lala beegsanayaa dil. Sida aad la socotaan waxaa biloowday dagaal u dhexeeya labada argagixiso [al-Shabaab iyo ISIS], dagaalkuna waxa uu salka ku hayaa dhaqaale doonis. Hadda waxa ay diiradda saareen baad ay ugu yeeraan canshuur oo laga qaado ganacsatada.”
Qaybta khudbaddaas oo afka Ingiriisku ku qoran waxa ay ahayd sidan: “NICHOLAS HAYSOM – 3 Jan 2019 (Security Council): In Mogadishu and Puntland, pro-ISIS elements have targeted business owners using extortion to extract revenue and conducting assassinations. It appears that the cause of the conflict between the two extremist groups is now primarily driven by financial interests. Their focus is now on extortion of so called taxes.”
Horey ayaa Radio Daljir daaha uga rogey ammaandarada ka jirta Puntland, siiba magaalooyinka Bossaso iyo Gaalkacyo ayada oo sannadkii dhammaaday ee 2018, siiba bilihii la soo dhaafay ee Diseenbar iyo Noofembar ay amni-xumida Bossaso gaartay heerar cusub, dhan qarax, dhaawac, iyo waliba dilal joogto ah. Intaas ayaa haddana waxaa feer socda ayada oo duleedka Bossaso ay ka dheceen dagaalo u dhexeeya labada kooxood ee al-Shabaab iyo Daacish (ISIS).
Ammaanka Bossaso ma ah mid ku kooban qarax, dhaawac iyo dilal lala beegto nindoorka Puntland ee waa mid wata hanjabaado lid ku ah ganacsatada Bossaso iyo canshuuro cusub oo ay soo rogeen kooxo loo malaynayo in ay yihiin isla kooxaha Daacish (ISIS) iyo al-Shabaab.
Radio Daljir oo xiriir la samaysay saraakiil ammaanka Puntland oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa dagaalka u dhexeeya labadaas kooxood la xiriirinaya canshuuraha ay qolo walbaa ku soo rogtay ganacsatada Bossaso.
Sidii aan barnaamijyadeenii hore ee ammaanka Bossaso ku shaacinay, dilalka iyo iskudayada dil kuma koobna kuwo lala beegsado nindoorka Puntland, laakiin waxaa jira kuwo si gaar ah loola beegsado Ciidanka Canshuuraha ee degmada Bossaso. Radio Daljir oo xiriir la samaysay qaar ganacsatada suuqa Bossaso ayaa noo xaqiijiyey in Ciidanka Canshuuraha ee Dowladda Hoose ee Bossaso ay cabsi darteed diideen in ay suuqa canshuur ka soo aruuriyaan. Markii aan ganacsatada weydiinay, “yaa hadda canshuuraha dowladda hoose idin ka aruuriya” waxa ay noogu jawaabeen, “Dowladda Hoose ee Bossaso waxa ay qoratay oo shaqaalaysiisay dumar indhoshareeran, ayagaana hadda si qarsoodi ah nooga aruuriya canshuuraha Dowladda Hoose ee degmada Bossaso.”
Tan iyo bartamihii sannadkaan ayaa shacabka Bossaso iyo dhammaan Puntland waxa ay isweydiinayeen cidda masuulka ka ah oo lagala xisaabtamayo ammaanka Bossaso. Illaa iyo hadda sida ka muuqata ammaanka Bossaso ma jiro wax iska badalay xisaabtankii shacabku dalbaday.
Tan iyo intii ay wiiqmeen ciidamada Booliska Puntland, siiba kuwa Bossaso, Taliyihii Qaybta Gobolka Bari Cabdixakiin Yusuf waxa uu isku sharraxay Xildhibaan Gobolka Mudug, haddana waa Xildhibaan Dooran, ammaanka Puntland-na waxaa si toos ah ula wareegay Ciidamada Ammaanka Puntland ee loo yaqaan Puntland Security Force (PSF). PSF waxaa maalgaliya Dowladda Mareykanka, siiba Ciidamada Qalabka Sida ee Mareykanka iyo Taliskooda AFRICOM ee Stuttgart, Germany, toosna hadda u hoosyimaada Taliska CJTF-Horn of Africa (@CJTFHOA)
Ciidamada PSF waxaa bilo kahor taliye u ahaa Mudane Assad Cismaan Cabdullaahi oo hore booska ugala wareegay aabbihii Taliye Cismaan Diyaano, haddana ah Musharrax Madaxweyne Puntland sannadka 2019. Musharrax Assad ayaa xilkii taliye ee ciidamada PSF-ta ku wareejiyey walaalkiis Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano.
Radio Daljir oo ammaanka Puntland, siiba kan magaalooyinka Bossaso iyo Gaalkacyo, qoraalo iyo barnaamijyaba kaga hadashay waxaa si joogto ah u soo foodsaara hanjabaado, xabado nool oo lagu riday Agaasimaha Guud ee Radio Daljir, iyo waliba cagojuglayn ka timaada saraakiil iyo ciidamo ammaanka Puntland ee PSF-ta.
Amni-xumida, hanjabaadaha lala beegsado ganacsatada iyo dilalka joogtada noqday ee nindoorka Bossaso waa kuwo shacabka Puntland ay xilli doorashadaan isku weydiinayaan “yaa mudan in lagula xisaabtamo ama lagu abaalmariyo amnixumida magaalada Bossaso?”
Madaxweyne Gaas iyo Musharrax Madaxweyne Assad Diyaano oo ah labada masuul ee sannadkii 2018 ugu sarreeyey ammaanka Puntland ayaan midkoodna marna ka hadlin baadda lagu hayo ganacsatada Boosaaso iyo dilalka lala beegto nindoorka Puntland.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 16957
Dardaaran Xildhibaanada Dooran ee Puntland: Timaadadu waa maanta doorashada Guddoonkuna waa berri
Farriimihii Musharrax Gaas 2013-2014: “Baarlamaanku shaqadiisa ha qabsado … yuusan noqon baarlamaan Madaxweynaha ka amarqaata” (dhegayso)
KHABIIR KU TAQASUSAY ARIMAH ARGAGAXISADA.
FAAFI OO GAARSIIYA WIILASHA LA QALDAY EE GALGALA KUJIRA.
ISIS LEADER ABUBAKAR EX-NAME(ELLIOTE SHIMON)HE WAS MOSSAD AGENT.
ISIS WOR(GREATER ISRAELI PROJECT=PLAN 1980.).